Premier league - Voka-dalao 9 Decembre 2018 - West Ham v. Crystal Palace - ewa.mg
Premier league – Voka-dalao 9 Decembre 2018 – West Ham v. Crystal Palace
Crystal Palace - Premier League - West Ham
Henjana ao anatin’ny henjana ! Io ny azo ilazana ny Barea taorian’ny fandresena miezinezina azony, omaly, tao anatin’ny lalao ampahavalon-dalana, nifandonana tamin’ny ekipan’ny Repoblika Demokratikan’i Kongo. Misandratra avo ny voninahi-pirenena malagasy, nisongadina tao anatin’ireo firenena noheverina ho voadingana eo amin’ny sehatry ny baolina kitra afrikanina i Madagasikara. Faly ny vahoaka malagasy! Nidera eram-po eran-tsaina ireto maherifon’ny Malagasy ireto i Madagasikara iray manontolo, niaiky izao tontolo izao. Ny Barea hatramin’ny farany, tsy maintsy mandresy! Io ny ambentin-teny re teny am-bavan’ny rehetra, mandra-maraina ary hitohy hatramin’ny farany, hanosika ny Barea ho amin’ny ambony hatrany. Alefa Barea! Alefa hatramin’ny farany, manohana ary miara-mirona ny Malagasy 20 tapitrisa, ao an-damosina tsy hiala hatramin’ny farany.Fitaintainana no niainana, saingy fandresena ny setrin’izany rehetra izany! Hatramin’ny sengondra farany, tsy nisy niala fa nankahery, nitabataba, nivavaka ny rehetra. Nandresy ny Barea, hiakatra ho an’ny amin’ny ampahefa-dalana, tranga tsy nampoizin’ireo firenena mpifanandrina, saingy efa voasoratra ho an’ny Malagasy. Tantara iray tsy ho voafafa mandrakizay eo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena malagasy sy ho an’i Madagasikara iray manontolo izao fandresena miezinezina izao, izay irariana hitohy hatramin’ny farany! Ny Barea hatramin’ny farany!Samy naneho ny hafaliany ny rehetra, hafaliana tsy omby tratra, hafaliana nivadika ho fihavanana sy firaisankina, faly ny Malagasy! Raha izao herim-pontsika izao, ho lasa lavitra ny Barea an’i Madagasikara, nitondra anjara biriky lehibe ho fanomezana hery ireto mpilalaontsika ireto ny fiombonam-pon’ny Malagasy toy izao, hampitombo ny herijika, vao mainka hampisandratra amin’ny faratampony ny voninahi-pirenena, hiroso hatrany ny Barea, tsy miverin-dalana intsony. Lalana efa natomboka, tsy maintsy vitaina hatramin’ny farany. Hatramin’ny farany, mandresy ny ekipam-pirenena malagasy, ny Barea, Alefa Barea, Alefa hatramin’ny farany! Ao an-damosina hatrany ny Malagasy tsivakivolo! Mi.RazL’article Barea hatramin’ny farany! a été récupéré chez Newsmada.
NBA- Voka-dalao 19 Nov 2018- Millwaukee Bucks vs Denver Nuggets
Bucks / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval G. Antetokounmpo 39 13/25 0/6 3/6 3 9 12 6 3 2 4 0 29 30 K. Middleton 37 4/15 1/8 4/4 1 5 6 5 2 2 0 0 13 15 B. Lopez 33 3/10 2/7 0/0 1 9 10 0 3 0 1 3 8 13 E. Bledsoe 35 8/10 3/4 4/9 2 3 5 5 1 3 4 0 23 25 M. Brogdon 31 5/11 1/2 2/3 1 7 8 3 0 0 3 0 13 14 E. Ilyasova 19 3/6 2/2 0/0 2 2 4 0 3 0 1 0 8 8 T. Maker 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P. Connaughton 18 2/3 1/2 0/0 1 2 3 2 1 0 0 0 5 9 S. Brown 6 1/4 0/2 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 T. Snell 18 1/4 1/3 0/0 1 1 2 0 1 0 1 0 3 1 Total 40/88 11/36 13/22 13 38 51 21 16 7 14 3 104 Nuggets / 98 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval P. Millsap 29 3/9 0/4 2/2 2 7 9 2 3 1 1 1 8 14 J. Hernangomez 29 2/10 1/5 1/1 3 4 7 0 5 1 1 0 6 5 N. Jokic 33 8/18 3/8 1/1 3 2 5 5 1 1 3 0 20 18 J. Murray 36 7/14 2/5 1/2 2 6 8 9 3 0 5 1 17 22 G. Harris 35 6/16 2/6 0/0 0 0 0 6 3 1 2 0 14 9 T. Lyles 16 3/8 0/4 0/1 0 2 2 1 1 0 1 0 6 2 M. Plumlee 15 2/3 0/0 1/2 3 2 5 1 2 0 2 2 5 9 M. Morris 25 5/9 0/2 0/0 0 3 3 4 2 0 1 0 10 12 M. Beasley 22 4/7 4/7 0/0 0 4 4 2 0 1 0 0 12 16 Total 40/94 12/41 6/9 13 30 43 30 20 5 16 4 98
Fampiharana ny miralenta: tetikasa mitentina 400 000 euros ho an’ny rugby
Nampahafantarina, omaly tetsy amin’ny IFM Analakely, ny fanombohan’ilay tetikasa fampihenana ny tsy fitoviana eo amin’ny lahy sy vavy, amin’ny alalan’ny rugby, mitarika amin’ny fampisondrotana sy fampivoarana, eto Madagasikara”. Tetikasa mitentina 400.000 euros ka ny 330 000 euros, avy amin’ny masoivohon’i Frantsa eto Madagasikara, angady nananana sy vy nahitana izany. Marihina fa hiarahany miasa, amin’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena, ny Malagasy rugby ary ny Akademiam-pirenen’ny fanatanjahantena (ANS), sy ny fikambanana Terres en Mêlées izy ity. Samy nanoritsoritra ny maha zava-dehibe ny tetikasa ireo nandaha-teny: ny masoivoho frantsay eto Madagasikara, Rtoa Véronique Voulan sy ny filohan’ny Malagasy Rugby, Rakotomalala Marcel. Ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny fanatanjahantena malagasy, Ralaivao Lovatiako, nisolo tena ny minisitra Tinoka Roberto.Singa fototra telo Hahatrarana ny tanjona, noraisina ho fitaovam-panabeazana ny fanatanjahantena, indrindra fa ny rugby. Hiorina amin’ny singa fototra telo izy ity: ny fanofanana ka hanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fanomezam-pahalalana ireo mpampiofana. Eo koa ny fiofanana voalohany, mandritra ny roa taona, ho an’ny mpampianatra fanatanjahantena, izay 60 % ny vehivavy sy ny an’ireo mpanazatra, miaraka amin’ny fanampian’ireo mpampiofana sy manampahaizana frantsay, eo am-panombohana.Eo koa ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy fampirisihana ny lehilahy sy ny vehivavy, miankina amin’ireo ivontoeram-piofanana dimy an’ny fikambanana Terre en mêlées. Eo koa ny fanatanjahantena sy ireo mpiara-miombon’antoka, amin’ny alalan’ny fanatontosana semineram-paritra, miaraka amin’ireo kapitenin’ny ekipa isan-tokony, izay vehivavy ny ankamaroany avy amin’ireo taranja samy hafa hahalan’izy ireo ny karazam-panatanjahantena.Nanatrika ity lanonana ity sy nanome ny heviny mikasika ny tetikasa ny talen’ny fanatanjahantena sy ny tale jeneralin’ny ANS. TompondakaL’article Fampiharana ny miralenta: tetikasa mitentina 400 000 euros ho an’ny rugby a été récupéré chez Newsmada.
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy androany 6 aprily 2019 teny amin’ny kianja mitafo Mahamasina ny taom-pilalaovana 2019 ny ASIEF (Association Sportive Interministérielle pour l’Entretien des Fonctionnaires). Natambatra tamin’io fotoana io ihany koa ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny fanatanjahantena miasa ho an’ny fandriam-pahalemana. Isan-taona dia misy ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho an’ny mpiasam-panjakana eny anivon’ny minisitera, ny andrim-panjakana isan-tsokajiny izay mivondrona ao amin’ny fikambanana ASIEF. Nitombo enina ny taranja hifaninanana amin’ity taom-pilalaovana ity. 19 ny fitambaran’ny ireo taranja ho an’ny olo-tokana sy iraisana raha ny tarehimarika voaray. “Hisy taranja vaovao hosokafana manomboka amin’ity taona ity dia ny mouvement gymnique d’entretien, fitaizam-batana ho an’ny mpiasam-panjakana efa tsy nanao fanatanjahantena intsony”, hoy ny sekretera jeneralin’ny minisitera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Noho ny fiaraha-miasa tamin’ny akademiam-pirenena ny fanatanjahantena sy ny ASIEF dia nivoaka ny andiany voalohany amin’ireo“animateur santé sport” hampiofana io taranja io. Nambaran’ny sekretera jeneralin’ny ministera fa taranja tsy maintsy atao isaky ny ministera izy ity ho fitaizam-batana ho an’ny mpiasam-panjakana sy hisorohana ireo aretina maro mahatonga fahafatesana aloha loatra. Ao anatin’ny tanjony ny ASIEF rahateo izany. Noho izany, anisany taranja ho hita mandritra ny fifaninanana nasionaly ny ASIEF atao any Diego amin’ny volana oktobra ity taranja vaovao ity. Ankoatra izany dia taranja vaovao ihany koa ny belote, jeu d’echec, fanorona, ny hazakazaka amin’ny bisikileta, araka ny fanazavan’ny filohan’ny ASIEF, Andrianarison Jean Aimé na John Love. Raha ny fantatra dia ny 13 aprily 2019 ho avy izao ny fifanintsanana amin’ny taranja tsipy kanetibe. Manao antso fitondram-panjakana ny filohan’ny ASIEF mba hampitombo ny tetibola natokana ho fikambanana. “Raha ny fantatro dia 60 tapitrisa Ariary ny fanampiana ara-bola omen’ny fanjakana. Nihena izany tamin’ny taona lasa. Mangataka mba ho ampiana izany satria mitombo ny mpiasam-panjakana mandray anjara”. Marihina fa 12.000 mpiasam-panjakana nandray anjara tamin’ny fifanintsanana nasionaly natao tany Toamasina tamin’ny taona lasa. Lynda A. Cet article ASIEF: Nitombo ny taranja hifaninanana amin’ity taom-pilalaovana 2019 ity est apparu en premier sur déliremadagascar.
News - Sport - Téchnologie - News Mada
« Orange Esport Experience »: tompondakan’i Afrika Rakotoarison Mamitiana
Tsara ny vokatra ho an’i Madagasikara. Tompondaka Rakotoarison Mamitiana ary tompondaka lefitra kosa Ralainaivo Mamitiana Herilanto, tamin’ny sokajin-dalao nisy azy avy. Niakatra ny haavo teknikan’ny mpilalao “jeu vidéo” malagasy, raha ireo vokatra ireo no jerena. Nahita fahombiazana ny solontena malagasy niatrika ny lalao famaranana tamin’ny fifaninanana “Esport Orange Experience”, notontosaina tao amin’ny lapan’ny Kongresy “King Fahd” tao Dakar. Lalao “jeu vidéo” izay natao omaly alakamisy hariva. Nandrombaka ny amboara tamin’ny sokajy “Asphalt 9” , Rakotoarison Mamitiana. Tsiahivina fa “jeu vidéo” miisa 4, dia ny “Pro Evolution Soccer 2019”, “Asphalt 9”, “Street Fighter V” ary ny “Arena of Valor” no hifaninanan’ireo mpifaninanana miisa 50 ary ny 3 amin’ireo no nananan’ny Malagasy solontena. Nandravarava ary nanamarika isa ambony i Mamitiana nanoloana ny mpifanandrina taminy, Emmanuel Weaver avy any Kameronina. Nisesy ny fandresena nandritra ny dingana telo ho an’ity solontena malagasy ity ary tsara ny vokatra satria vitany tao anatin’ny 12’46’’ ireo dingana telo ireo, raha toa ka 12’54” no nanaovan’ilay Kameroney izany. Vokatr’ity fandresena ity, nahazo vola mitentina 1500 euros Rakotoarison Mamitiana. Tompondaka lefitra “PES 2019” i Rayan Namiratra i Madagasikara tamin’ny fifaninanana ity satria tafakatra tamin’ny dingana famaranana, sokajy “PES 2019” ihany koa Ralainaivo Mamitiana Herilanto, fantatra amin’ny solon’anarana hoe Rayan ary tompondaka lefitra amin’ity sokajy ity. Tsy afa-bela nanoloana azy ilay Ivorianina antsoina hoe Hermann, hatrany am-piandohan’ny fifanandrinanana. Nanjakan’i Rayan tanteraka ny 20 minitra nilalaovana ary izy no nanokatra ny isa. Nanejika azy hatrany i Hermann, saingy tsy nahatohitra firy. Nisaraka tamin’ny isa 3 no ho 2 ny roa tonta teo am-pialana sasatra. Vao maika nihanahazo hery i Rayan nandritra ny ampaham-potoana faharoa ary nanamarika isa iray indray, 5 minitra tsy hifarananan’ny lalao. Isa 4 no ho 3 no nisarahan’izy ireo tamin’ny ora farany. Ratsy kosa ny vokatra ho an’ilay mpilalao malagasy iray, Ratsimiliavahoaka Ranto Manoro, sokajy “Street Fighter V”. Raraka teo amin’ny lalao fifanintsanana ho an’ny 8 voalohany izy ary tsy afaka nanohy intsony ny fifaninanana. Marihina fa hitodi-doha eto an-tanindrazana, anio, asabotsy 8 desambra ireto mpilalao “jeu vidéo” malagasy, 3 mirahalahy, ireto. Mi.Raz L’article « Orange Esport Experience »: tompondakan’i Afrika Rakotoarison Mamitiana a été récupéré chez Newsmada.
Ao anatin’ny fitaintainana fatratra ireo tomponandraikitry ny Paris St Germain, amin’izao fotoana izao. Fantatra mantsy fa maratra ireo mpilalao andrin’ity ekipa parizianina ity dia i Kylian Mbappé sy i Neymar. Samy voadona mantsy izy mirahalahy ireto, nandritra ny filalaovany tany amin’ny ekipam-pireneny avy, ny talata lasa teo. Araka ny fantatra, mety haharitra herinandro ny tsy fahazoan’izy mirahalahy ireo miakatra kianja. Araka izany, mety tsy ho afaka hiatrika ny lalao mandroso hikatrohana amin’ny Liverpool, eo amin’ny andro fahadimy amin’ny fifanintsanana isam-bondrona, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa «ligue des champions», izy mirahalahy. Fihaonana, hotanterahina ao amn’ny Parc des Princes, ny alarobia 28 novambra, ho avy izao. Raha tsiahivina, niatrika lalao firahalahiana, tamin’ny liona tsy voafolak’i Kameronina, ny talata lasa teo, i Brezila. Vao nanomboka 8 mn monja anefa ny fihaonana dia efa niala ny kianja i Neymar, taorian’ny daka lavitra nataony ka naharovitra ny tongony havanana. Marihina fa nandresy tamin’ny isa tokana, 1 no ho 0 ny Brezilianina, tamin’izany. Mbappé indray voadona teo amin’ny sorony, nandritra ny fihaonan’i Frantsa, tamin’i Orogoay, izay nandresen’ny Frantsay, tamin’ny isa 1 no ho 0 ihany koa. Manana isa 5 ary mitana ny laharana fahatelo, ny PSG ao amin’ny vondrona misy azy, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa. TompondakaL’article Kitra any Eoropa: sahiran-tsaina ny PSG fa maratra i Mbappé sy i Neymar a été récupéré chez Newsmada.